Emva kokufunda oku, ngaba unesibindi sokusela ikofu yonke imihla ngekomityi yephepha eligutyungelweyo le-PE?
Hamba ungene kumngxuma wokugaya we-APP kwaye ubone ukuba umthi uba yimpuphu njani?
Iphepha lendebe lephepha lePlastiki le-Zero lifumene isiqinisekiso se-TÜV esonakalisiweyo
Usuku oluhle kwaye ndiyathemba ukuba uqhuba kakuhle.
Namhlanje ndiza kukubonisa ulwazi olukhethekileyo lweshishini malunga nawe nge-FBB, sonke siyazi ukuba zonke iindleko (izinto zokwenza izinto kunye nexabiso lokuhambisa) zinyuka kakhulu ngaphambili kwaye oko kuya kusenza sobabini kwimeko enzima. Thina njengearhente enkulu ye-APP kokubini nakwilizwe liphesheya siya kukunika into entsha ...
Yintoni iphepha PE camera?
1: Intsingiselo PE iphepha wawutyabeka: Coat le eshushu inyibilika PE iplastiki film ngokulinganayo phezu kwephepha ukwenza iphepha wawutyabeka, ekwabizwa ngokuba iphepha PE. 2: Umsebenzi kunye nokusetyenziswa xa kuthelekiswa nephepha eliqhelekileyo, linamanzi kunye neoyile. Isetyenziselwa ukwenza ukutya ...
Inyathelo elincinci Umahluko omkhulu- iBhodi ye-Bio
Inkcubeko yokurisayikilisha kwe-PE 一: Imeko yezinto zobugcisa zokurisayikilisha 1. ukuqokelela 2.sorting 3.shredding 4.washing 5.melting and pelletizing 2. Ukuhlaziya kwakhona okuonga iindleko nokusebenzayo ...
ISIZATHU SOKUBA SIBAMBE IPlastikhi SIMAHLA
Ixabiso eliphantsi, ukusetyenziswa okulula, ukulungiswa ngokulula kunye nokuveliswa, ubunzima bokukhanya, kunye neepropathi ezizinzileyo zomzimba kunye neekhemikhali, iiplastikhi zazikhe zathathwa njengenye yezinto "eziphumelele kakhulu" ezenziwe ngabantu kwimbali. Nangona kunjalo, ngokuhambelana nenani elikhulu lokusetyenziswa, inani le-p ...
malunga nesangbo fold, ungadinga ukwazi into
Hee, kuqala ndiyayiqonda kakuhle into oyikhathaleleyo nesizathu, kuba uhlala ungabathengi bokugqibela ephepheni ngaphambili .Kwaye kukho amanqaku athile apha ngezantsi ndifuna ukwenza inkcazo ecacileyo kuwe, nokuba wenza ishishini nathi okanye hayi . 1: "NINGBO FOLD" C1S ibhodi lendlovu yi ...
Ibhodi yokutyabeka ibhodi yophondo lwendlovu
Ikhadi lokutya elibhijelwe ngamacala angama-ultra-high-ultra-lightweight ｜Ixabiso eliphantsi lezinto | Akukho bumenyezeli bokuqaqamba kokukhanya: 1.63-1.74 cm3 / g; Ubunzima be-200 ~ 350g / m2 Isindululo: ● Ukuxinana okukhanyayo, ukukhanya okulula, okungenabungozi kwindalo, okuphantsi ...
Izinto ofuna ukuzazi malunga nephepha lekraft
Yintoni iphepha lekraft? Iphepha lasekhaya Umphezulu wephepha ngumbala o-tawny, ubizwa ngokuba ubufana nobuso beenkomo. Umgubo wephepha okwakhiwa uthathwa kwizinto ezingafunekiyo ngendlela ye-kraft pulping. Ndi ...
Ifayibha ende iphepha elipheleleyo lomthi
Ifayibha ende iphepha elipheleleyo lomthi eliqhelekileyo lephepha leplp elisetyenziswe kwinkqubo yemveliso lifutshane nefayibha, kodwa sisebenzisa ifayibha ende, amandla aqine amaxesha ama-5 angcono kunefayibha emfutshane! Ukuqina okugqwesileyo kunye nokumelana okuqinileyo kokuqina kokuqina kungekuko ...
INTSHAYELELO NGEPHEPHA LOKU-1: Iphepha le-offset iphepha lisetyenziselwa ukushicilela i-lithographic (offset) okanye oomatshini bokuprinta ukuze baprinte izinto zokuprinta zombala ezihambele phambili, ezinje ngamaphepha ombala wemifanekiso, iincwadi zemifanekiso, iiposta, uphawu lokushicilela ...
INTSHAYELELO NGEPHEPHA LOKUFUNDA Iphepha lokunceda lelona phepha lisetyenziswayo ekuprinteni iincwadi neemagazini. Ilungele imisebenzi ebalulekileyo, iincwadi zesayensi kunye netekhnoloji, iijenali zemfundo kunye nezinto zokufundisa, ezinje ngephepha lokubhaliweyo. Iphepha Relief ngokwendlela ukwakheka pa ...
Kutheni le nto ubukhulu bephepha uG (G)?
Kutheni le nto ubukhulu bephepha uG (G)? Icandelo lamaphepha onke nguG (G). Thatha ubunzima bemitha yesikwere sephepha njengenyathelo lobunzima obuthile bephepha. Umzekelo: iphepha eliqhelekileyo lekopi li-80g, elilingana nobunzima bemitha yesikwere yekopi p ...